Football Khabar » मेस्सीको पेनाल्टी मिस र कीर्तिमानी गोल एकैपटक : बार्सिलोना भने बराबरीमा रोकियो !
मेस्सीको पेनाल्टी मिस र कीर्तिमानी गोल एकैपटक : बार्सिलोना भने बराबरीमा रोकियो !
कप्तान लिओनल मेस्सीले पेनाल्टी मिस गरेपछि पनि कीर्तिमानी गोल गरेको खेलमा बार्सिलोना बराबरीमा रोकिएको छ । शनिबार राति आफ्नो घरेलु मैदान क्याम्प नोउ रंगशालामा पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै बार्सिलोनाले खेलमा अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा पाहुना टोली भ्यालेन्सियासँग २–२ को बराबरी खेल्दै अंक बाँड्न बाध्य भयो । बार्सिलोनाले यो सिजन मात्रै सातौंपटक अंक गुमाएको हो ।
पहिलो रोजाइको टोली लिएर उत्रिए पनि घरेलु मैदानमा निकै फितलो प्रदर्शन गरेको बार्सिलोनाले पहिला गोल खाएको थियो । खेलको २९औं मिनेटमा भ्यालेन्सियाका कार्लेस सोलेरले हानेको कर्नर किकमा मोउच्टार डिखाबेले आकर्षक हेडिङमार्फत् गोल गरे । बार्सिलोनाको फितलो डिफेन्सको अघिल्लो भागमा अनमार्क रहेका उनलाई फ्रि हेडरमार्फत् बललाई जाली चुमाउन कुनै कठिनाइ नै परेन । बार्सिलोनाका डिफेन्डरलाई जिल्ल बनाउँदै उनले सो गोल गरेका थिए ।
तर, त्यसपछि खेलमा केही नाटकीय दृश्य देखिए । पहिलो हाफको थप समयमा भ्यालेन्सियाका खेलाडीले बल लिएर बक्सभित्र पुगेका बार्सिलोनाका एन्टोनी ग्रीजम्यानलाई लडाएपछि रेफ्रीले बार्सिलोनालाई पेनाल्टी दिँदै कप्तान जोसे लुइस गयालाई सोझै रातो कार्ड दिएका थिए । तर, भ्यालेन्सियाका खेलाडी रेफ्रीको सो निर्णयविरुद्ध जोडदार अपिल गरेपछि रेफ्रीले सो फउललाई भिएआरमार्फत् हेरे ।
गयाले बक्समा ग्रीजम्यानलाई पछाडिबाट हलुका धक्का दिएर लडाएका थिए । तर, रेफ्रीले पछि आफैं साइडपिचमा गएर भिएआर जाँच गरेपछि उनले सुरुमा दिएको रातो कार्ड रद्द गरेर पहेंलो कार्ड मात्रै दिएका थिए । तर, बार्सिलोनाले पाएको पेनाल्टी भने रद्द भएन । र, सो पेनाल्टी कप्तान मेस्सीले प्रहार गरे ।
तर, मेस्सीले तल्लो बार च्यापेर हानेको पेनाल्टी भ्यालेन्सियाका गोलकिपरले सजिलैसित रोके । तर, किपरले बल क्लियर गर्न सकेनन् । र, रिबान्उन्ड बलमा बार्सिलोनाका युवा खेलाडी पेड्रीले छोटो दूरीको क्रस पास दिएकोमा मेस्सीले हेडिङमार्फत् निकै कठिन अवस्थाबाट गोल गरेपछि खेल १–१ को बराबरीमा आयो । पहिलो हाफमा ९ मिनेटसम्म थप समय खेलाइएको थियो ।
भ्यालेन्सियाविरुद्ध मेस्सीले गरेको यो गोल कीर्तिमानी थियो । यही गोलको मदतमा उनले ब्राजिलियन लिजेन्ड पेलेले आफ्नो करिअर दौरान घरेलु क्लब सान्तोषका लागि गरेको कीर्तिमानी ६४३ गोलको रेकर्डसँग बराबरी गरे । मेस्सीले पेलेका नाममा रहेको सिंगल क्लबका लागि सर्वाधिक गोलको रेकर्ड बराबरी गरेका हुन् ।
पहिलो हाफ १–१ मा सकिएको खेलमा दोस्रो हाफ झनै रोमाञ्चक बन्यो । ५२औं मिनेटमा बार्सिलोनाका युवा सेन्टर डिफेन्डर रोनाल्ड अराउजोले बक्स भित्रबाट फ्लाइङ किकमा बडा शानदार गोल गरेर टिमलाई २–१ को अग्रता दिलाए । बार्सिलोनाको सिनियर टोलीका लागि यो उनको पहिलो गोल थियो ।
तर, बार्सिलोनाको अग्रता लामो समयसम्म टिकेन । ६९औं मिनेटमा उरुग्वेन फरवार्ड म्याक्सी गोमेजले बक्सभित्रबाट सहजै गोल गरेपछि खेल २–२ को बराबरीमा आयो । र, बार्सिलोना थप दबाबमा पर्न गयो । त्यसपछि खेलमा दुवै टोलीे पटक–पटक गोलका अवसर बनाए । तर, गोल हुन नसकेपछि खेल २–२ को बराबरीमा टुंगियो ।
यस खेलमा बार्सिलोनाले टिमका रूपमा फितलो प्रदर्शन गरे पनि खेलमा पकड जमायो । उसले खेलभरिमा भ्यालेन्सियाविरुद्ध ७३ प्रतिशत बल आफ्नो पकडमा राख्दै २५ पटक आक्रमण बुन्दा ९ पटक अन टार्गेट हानेको थियो । यता, बार्सिलोनालाई खेलभरि नै आछुआछु पारेको भ्यालेन्सियाले बार्सिलोनाविरुद्ध मात्रै २७ प्रतिशत बल पायो भने १२ पटक आक्रमण बुन्दा मात्रै ४ पटक अन टार्गेट हानेको थियो ।
अब यो बराबरीपछि बार्सिलोनालाई अंक तालिकामा झट्का लागेको छ । पाहुना टोली भ्यालेन्सियाले क्याम्प नोउबाट १ अंक लिएर जान सफल हुँदा बार्सिलोनाले यही सिजन मात्रै सातौंपटक अंक गुमायो । बार्सिलोना अब १३ खेलको कूल ३९ अंकमध्ये मात्रै २१ अंक बनाएर पाँचौं स्थानमा छ (अन्य टोलीको खेलपछि यो फेरबदल हुन सक्नेछ) । बार्सिलोना अब एक खेल कम खेलेको लिग लिडर एथ्लेटिको मड्रिडभन्दा अझै ८ अंकले पछि छ भने समान खेल खेलेको रियल मड्रिडभन्दा ५ अंकले पछि छ ।
प्रकाशित मिति ४ पुष २०७७, शनिबार २२:५५